2013 Nhare yekushambadzira Mateki uye Zvimiro | Martech Zone
China, January 2, 2014 Chitatu, Ndira 1, 2014 Douglas Karr
Takataura nharembozha gore rapfuura? Ini handikwanise kukuudza kuti mangani zviuru zvezvirevo zvataita uye zvatiri kuramba tichiita. Zvakadaro - chete 25% yemakambani ane nhare mbozha… ouch. Kutumira mameseji, nharembozha webhu, mafoni ekushandisa uye nharembozha email zvakajairika kune yega nzira yekutengesa. Kana usiri kumhanyisa, uri kurasikirwa nechikamu chikuru chevateereri icho chinoda chigadzirwa chako kana sevhisi.
Idzo nhamba dzinoshamisa - ruzhinji rwemakambani anobvuma kusava nehurongwa hwekufambisa, uye fungidziro yangu ndeyekuti avo vanofunga kuti vane zano renhare havana kuziviswa. Ivo vanofunga kuti kungova neapp kana nharembozha-inoshamwaridzika webhusaiti inokwana zano. Neraki maratidziro ari kutanga kuve nehungwaru nezvinhu zvakaita sekuteerera dhizaini uye HTML5 webhu webhu vs. maapplication emuno, uye vatengesi vari kugovera yakawanda uye yakawanda bhajeti kushambadziro yenhare. Neil Bhapkar, Uberflip VP yeKushambadzira.
Nyowani Makore Akakosha - Zviuru zveMifananidzo ye $ 9.95!